Sababtii ay maanta u joogsatay Shaqadii Garoonka Diyaaradaha Aadan Cadde oo la ogaaday (Akhriso) - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis. Sababtii ay maanta u joogsatay Shaqadii Garoonka Diyaaradaha Aadan Cadde oo la ogaaday (Akhriso) - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis.
Dib u dhac saacado qaatay ayaa maanta ku yimid howlaha shaqada ee safarradagaroonka diyaaradaha ee Aadan Cadde, magaaada Muqdisho maanta kadib markii shirkadda qaabilsan baaritaanka Boorsooyinka rakaabka ay joojisay shaqadii, iyadoo sheegtay inaan la siinin lacago ay ku leeyihiin dowladda Soomaaliya.
Mid ka mid ah dadka ka dhoofayey garoonka diyaaradaha Aadan Cadde International Airport saaka ayaa isna sheegay inuu dib u dhac ku yimid safarkiisa muddo saddex saacadood ah.
Garoonka Aden Cadde
Previous articleXOG: Khilaaf ka dhex taagan Ra’iisal Wasaaraha iyo Wasiirka Dhaliyarrada (Maxay isku hayaan?)
Next articleEng. C/qaadir Aadan Cadde: “Waxa Dhulka Boobaya waa Qolada Hoyga Xamar ee ma ahan Dadka dhulka gatay”